Ugu Weyn Ee Curly Hoya
Cudurada waaweyn iyo cayayaanka hoi: ka hortagga iyo daaweynta
Hoya ama, sida lagu magacaabo, wax walbaa waa geed canab ah oo ka mid ah qoyska Lastonev. Cuntadani waxay magaceeda ku heshay sharaf ka mid ah Thomas Hoy, oo ah ninkii beerta ka soo waday England. Maanta adduunka waxaa jira ilaa 200 nooc oo dhir ah. Dooxada, hoiyu waxaa laga heli karaa Koonfurta Shiinaha, India iyo Australia. Abuuruhu waxay ku faafaan dhinacyada isku-dhafan iyo dogob-geedka.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Curly Hoya 2020